Politika momba ny fiainana manokana - Blog SunTrust
Ity Politika momba ny tsiambaratelo ity dia mifehy ny fomba fanangonana, fampiasana, fitazonana ary famoahana vaovao voangona avy amin'ny mpampiasa (tsirairay avy, “Mpampiasa”) iray avy amin'ny tranonkala www.usanewscourt.com (“Site”). Ity politika manokana ity dia mihatra amin'ny tranokala sy ny vokatra sy serivisy rehetra natolotry ny Specs Price Nigeria.
Personal famantarana vaovao
Azontsika atao ny manangona fampahalalana momba ny mombamomba anay manokana amin'ny mpampiasa amin'ny fomba isan-karazany, ao anatin'izany, fa tsy ferana, rehefa mitsidika ny tranokalanay ny mpampiasa, mametraka baiko, misoratra amin'ny alàlan'ny gazety, mameno takelaka iray, ary mifandraika amin'ny hetsika, serivisy hafa, endri-javatra na loharanom-pahalalana ampiasainay amin'ny tranokalanay.
Mety angatahina ny mpampiasa, raha ilaina, anarana, adiresy mailaka. Na izany aza, ny mpampiasa dia afaka mitsidika ny tranokalanay tsy mitonona anarana. Hanangona ny mombamomba ny mombamomba anay manokana avy amin'ny mpampiasa izahay raha toa ka manolotra an-tsitrapo izany fampahalalana izany aminay. Ny mpampiasa dia afaka mandà tsy hanome fampahalalana momba ny tena manokana, afa-tsy ny manakana azy ireo tsy hanao hetsika sasany mifandraika amin'ny tranokala.
Non-manokana famantarana vaovao
Mety tsy manangona vaovao momba ny famantarana manokana Users isaky ny mifandray amin 'ny Site. Non-mombamomba famantarana manokana dia mety ahitana ny navigateur anarana, ny karazana ordinatera sy ara-teknika momba ireo mpampiasa fitaovam-fifandraisan'izy ireo amin'ny Site, toy ny rafi-miasa sy ny Internet mpanome tolotra ampiasaina sy ny hafa toy izany koa ny vaovao.
Web navigateur Cookies
Ny Site afaka mampiasa "mofomamy" mba hanatsarana User traikefa. Mpampiasa ny aterineto navigateur mametraka mofomamy eo amin'ny fiara mafy ny rakitsoratra-mitandrina tanjona ary indraindray ny manara-maso ny mombamomba azy ireo. Mpampiasa dia afaka misafidy ny hametraka ny Internet navigateur mba mandà mofomamy, na mba hanairana anao, rehefa mofomamy no nalefa. Raha manao izany izy ireo, manamarika fa faritra sasany ny Site tsy miasa araka ny tokony ho mety.
Ahoana no mampiasa nanangona vaovao
Usanewscourt manangona sy mampiasa ny mombamomba azy manokana ho an'ireo mpampiasa manaraka:
- Mba hananana manokana ny zavatra niainan'ny mpampiasa: Mety hampiasa fampahalalana ao anaty agregate izahay hahafantarana ny fomba ampiasain'ny Mpampiasa anay vondrona ny serivisy sy loharano omena ao amin'ny tranokalanay.
- Mba hanatsarana ny tranokalanay: Miezaka hatrany izahay manatsara ny fanoloranay tranokala mifototra amin'ny fampahalalana sy hevitra azonay avy aminao.
- Hanatsarana ny serivisy ho an'ny mpanjifa: Ny fampahalalana anao dia manampy anay hamaly amin'ny fomba mahomby kokoa ny fangatahana serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny filàhan'ny mpanohana anao.
- Hanodinana ny fifanakalozana: azonay ampiasaina ny fampahalalana omen'ny mpampiasa momba ny tenany rehefa mametraka kaomandy hanomezana serivisy an'io baiko io fotsiny izahay. Izahay dia tsy mizara izany fampahalalana izany amin'ny antoko ivelany afa-tsy amin'ny fatra ilaina amin'ny fanomezana ny serivisy.
- Mba hitantanana votoaty, fampiroboroboana, fanadihadiana na endri-javatra amin'ny tranokala hafa: handefasana ny fampahalalana ho an'ireo mpampiasa izay neken'izy ireo horaisina momba ny lohahevitra heverinay fa hahaliana azy ireo.
- Mandefa mailaka tsindraindray: Ny adiresy mailaka ampiasain'ny mpampiasa amin'ny fikarakarana lamina, dia hampiasaina handefasana vaovao sy fanavaozana momba ny filaharany fotsiny. Azo ampiasaina ihany koa izy io hamaliana ny fanontaniany, sy / na fangatahana na fanontaniany hafa. Raha manapa-kevitra ny hiditra ao amin'ny lisitry ny mailaka anay ny mpampiasa dia handray mailaka izay mety misy ny vaovaon'ny orinasa, ny fanavaozana, ny fampahalalana momba ny vokatra na serivisy sns.
Ahoana no iarovantsika ny vaovao
Mandany mety isika fanangonana antontan'isa, fitehirizana sy fanodinana fanao sy ny fiarovana fepetra mba hiarovana an'i tsy nahazoan-dalana fidirana, fanovana, fiovana, famborahana na fandringanana ny mombamomba, anaram-pikambana, ny tenimiafina, raharaham-barotra vaovao sy tahirin-kevitra voatahiry eo amin'ny Site.
Mizara ny vaovao manokana
Izahay dia tsy mivarotra, mifanakalo, na manofa fampahalalana momba ny mombamomba ny mpampiasa amin'ny hafa. Azontsika atao ny mizara fampahalalana momba ny demografika mitambatra izay tsy mifandray amin'ny fampahafantarana manokana momba ny mpitsidika sy ny mpampiasa amin'ireo mpiara-miasa aminay, ireo mpiara-miasa atokisana ary mpanao dokam-barotra ho an'ny tanjona voalaza etsy ambony.
Azontsika atao ny mampiasa mpamatsy tolotra antoko fahatelo hanampiana anay hiasa amin'ny orinasantsika sy ny tranokala na hitantana hetsika ho anay, toy ny fandefasana taratasim-baovao na fanadihadiana. Azontsika atao ny mizara ny mombamomba anao amin'ireto antoko fahatelo ireto ho an'ireo tanjona voafetra nomenao nomenao anay ny fahazoan-dàlana.
Fahatelo antoko tranonkala
Ireo mpampiasa dia mety mahita doka na atiny hafa ao amin'ny tranokalanay izay mampifandray amin'ireo tranokala sy serivisin'ireo mpiara-miasa aminay, mpamatsy, mpanao dokam-barotra, mpanohana, mpanome fahazoan-dàlana ary antoko fahatelo hafa. Izahay dia tsy mifehy ny atiny na rohy izay miseho amin'ireo tranokala ireo ary tsy tompon'andraikitra amin'ireo fomba fanao ampiasain'ny tranonkala mifandraika na avy amin'ny tranokalanay.
Ankoatr'izay, ireo tranokala na serivisy ireo, ao anatin'izany ny atiny sy ny rohiny, dia mety miova tsy tapaka. Ireo tranonkala sy serivisy ireo dia mety manana ny politikany manokana sy ny politikan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Ny fizahana sy ny fifaneraserana amin'ny tranokala hafa, ao anatin'izany ny tranokala izay misy rohy mankany amin'ny tranokalanay, dia iharan'ny fepetra sy politikan'ny tranokala manokana.
Ads niseho eo amin'ny toerana dia mety ho voavonjy ny mpampiasa amin'ny alalan'ny dokam-barotra mpiara-miasa, izay mety hametraka mofomamy. Ireo Cookies mamela ny dokambarotra mpizara hahafantatra ny solosaina izy ireo isaky ny mandefa dokam-barotra an-tserasera ianao mba tsy manangona vaovao momba ny famantarana manokana anao na ny hafa izay mampiasa ny solosaina. Zavatra tsy mamela ny dokam-barotra vaovao tambajotra to, ankoatra ny zavatra hafa, afaho lasibatra dokam-barotra fa mino ho amin'ny tena mahaliana anao. Izany fiainana manokana politika tsy manarona ny fampiasana ny mofomamy misy mpanao dokam-barotra.
Ny sasany amin'ireo doka dia mety aroson'i Google. Ny fampiasan'i Google ny cookie DART dia ahafahany mandefa doka amin'ny mpampiasa miankina amin'ny fitsidihan'izy ireo ny tranokalanay sy ireo tranonkala hafa amin'ny Internet. DART dia mampiasa "fampahalalana tsy azo fantarina manokana" ary TSY manara-maso ny mombamomba anao momba anao, toy ny anaranao, ny adiresy mailaka, ny adiresy ara-batana, sns. politika ao amin'ny http://www.google.com/privacy_ads.html
Fampandrenesana fandaharana amin'ny Mediavine
Raha mila fanazavana momba ny fanangonana angon-drakitra ataon'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny dokambarotra Mediavine ao anatin'izany ny fomba hialana amin'ny fanangonana data, tsindrio azafady Eto
Suntrustblog.com dia manam-pahendrena hanavao ity politika tsiambaratelo ity amin'ny fotoana rehetra. Rehefa manao izany izahay dia hamerina hijery ny daty nohavaozina eo amin'ny faran'ity pejy ity.
Manentana ny mpampiasa izahay hijery matetika ity pejy ity raha misy fiovana hahalalàna ny vaovao momba ny fomba anampiantsika amin'ny fiarovana ny mombamomba anay manokana. Manaiky ianao ary manaiky fa adidinao ny mandinika io politikan'ny tsiambaratelo io indraindray ary mahafantatra ny fanovana.
Ny fanekena ireo teny
Amin'ny fampiasana an'ity tranokala ity dia ampahafantarinao ny fanekenao io politika sy fehezin'ny serivisy io. Raha tsy ekenao amin'ity politika ity ianao, azafady fa aza mampiasa ny tranokalanay. Ny fampiasana ny tranokala aorian'ny fanoratana ny fanovana amin'ity politika ity dia ho raisin'ireo fiovana ireo.